Abakhiqizi be-Collagen nabahlinzeki - China Collagen Factory
I-collagen ene-Hydrolyzed uhlobo lomkhiqizo wemvelo wemvelo, ocebile kuzo zonke izinhlobo zezinto eziphilayo ezidingekayo ekuguqulweni komzimba komuntu.Ihlanjululwe esikhunjeni esisha sesilwane. Inezici eziningi. Okufana ne-surfactant, ukugcinwa kwamanzi, ukunamathela, ukwakha ifilimu, ukungasebenzi kahle njll.
I-peptide ye-fish collagen yenziwa ngezinhlanzi ezintsha ezijulile zasolwandle, ezicebile ngama-amino acid nezinye izinto ezilandelanayo, futhi zinenzuzo enkulu empilweni yomuntu.
Ama-peptide e-Collagen iqukethe amaprotheni angama-95% futhi athathwa njengohlobo olusha lokudla okunomsoco onamaprotheni amaningi.
I-Collagen ibha yokudla-Kondla, kulula futhi nesayensi.
I-Collagen yezimonyo ivumela isikhumba ukuba selule futhi sigoqe, futhi it unesibopho sokugcina nokuxhasa i ukuqina kwesikhumba.